I-Semalt: Ama-plugin we-WordPress Izinzuzo
Ama-plugin we-WordPress yizinto ezithakazelisayo neziwusizo kakhulu kunoma iyiphi i-webmaster noma i-blogger. Ngokusebenzisa i-plugin, abathuthukisi bewebhu nabaqambi bangakwazi ukwengeza kalula ukusebenza nokusebenzisana kwisayithi ngaphandle kokuqukethwe kwayo okuyi-static kuboniswe kuwo wonke amakhasi. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ifomu lokuxhumana elilula, umdlalo wevidiyo, noma abavimba be-spam kanye nezixhumanisi zokuqukethwe, ama-plugin yindlela elula futhi enamandla yokwenza izinto zenziwe.
Lapha i-Ross Barber, isazi esiphezulu se Semalt , isixoxile ngezinzuzo ezingu-10 ezinhle kakhulu ze-plugin ye-WordPress.
1. Ama-plugin alula ukusebenzisa
Ama-plugin we-WordPress alula ukusebenzisa futhi abe nesimo esibonakalayo esinembile esibenza sibe nencazelo kuwo wonke amawebhusayithi. Ungakwazi kalula ukufaka okuthunyelwe kwebhulogi, izithombe, kanye namakhasi asebenzisanayo kuwebhusayithi yakho futhi konke lokhu kulula ukukwenza, kuthatha imizuzu embalwa nje futhi kunciphise isikhathi sokufometha.
2. Kulula ukufinyelela kuzo zonke amadivayisi
Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ama-plugin we-WordPress angafinyelelwa kunoma iyiphi idivayisi. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa i-laptop noma i-smartphone, ungahlela kalula noma ufake / usebenze i-plugin futhi ufinyelele iwebhusayithi yakho uma ixhunywe kwi-intanethi.
3. Asikho isidingo sokuhlelwa kwe-HTML
Uma usufake ama-plugin we-WordPress afanelekile, awudingi noma iyiphi i-HTML editor noma isofthiwe ye-FTP ukuze wenze izinto zenziwe. Lawa ma-plugin alungile ngokufanayo kumawebhusayithi e-static non-static, futhi awudingi ukuhlela amakhodi we-HTML uma ufake i-plugin.
4. Iyahambisana nezinjini zokusesha
I-plugin ye-WordPress iyahambisana nezinjini zokusesha ikakhulukazi i-Google ne-Yahoo futhi yenza kube lula kuwe ukuthi uthuthukise ukusebenza kwesayithi lakho. Ukwengeza, wonke amakhasi, izithombe, okuthunyelwe, izihloko nezincazelo zithola indexed imiphumela yokusesha injini ngenxa yalezi plugin njengoba ikusiza ukwandisa isayithi lakho ngendlela engcono.
5. Lawula iwebhusayithi futhi ushintshe ukubukeka kwayo
Abaningi be-webmaster nababhlogi be-webmaster abazi ukuthi i-plugin ye-WordPress ingabasiza ukuthi bashintshe ukuhlelwa kwamasayithi abo. Kusho ukuthi ungasebenzisa ama-plugins amaningi ngangokunokwenzeka kokubili amawebhusayithi avamile nalawo angavamile.
6. Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso
Esinye sezidingo ezinkulu zabasebenzisi banamuhla yi-customization. Sonke sibheka amapulatifomu asenza sikwazi ukuthuthukisa amasayithi aphelele. Ama-plugin we-WordPress enza kube lula ngathi futhi sihlanganyele abasebenzisi abaningi nakakhulu kubhulogi namakhasi ewebhu.
Kuyiqiniso ukuthi ukuzibloga ngokwawo kuwumsebenzi ovelele futhi awukwazi ukukwazi ukuthuthukisa amaphuzu akho. Ezimweni ezinjalo, ungakwazi kalula ukufaka ama-plugin we-WordPress bese uqala ngokuqukethwe kwakho kwewebhu. Banekhono nemisebenzi ehlukene, ngakho benza umsebenzi wakho ube lula futhi uyashesha.
8. Thuthukisa ukusebenza ngokukhetha okufanele
Njengoba kunezinhlobo eziningi zama-plugin we-WordPress, kulula kunoma ubani ukuthuthukisa ukusebenza kwewebhusayithi noma ibhulogi ngendlela enhle yokukhetha. Ungangezela abaningi noma njengama-plugin amancane kwisayithi lakho ngangokunokwenzeka bese wenza kube buchwepheshe futhi kungcono kunakuqala.
9. Ama-plugin asiza ukukhulisa ibhizinisi lakho
Kuyiqiniso ukuthi ama-plugin we-WordPress asiza ukukhulisa ibhizinisi lakho. Uma isayithi lakho lihlelwe ngobuchwepheshe futhi libandakanya, kusobala ukuthi izivakashi eziningi futhi zizophenduka amakhasimende ajabule.
10. Ukungenzeka kwabasebenzisi abaningi
Njengomqondisi, ungangeza abasebenzisi abaningi kuwebhusayithi yakho ye-WordPress njengoba ufuna. Ungabanika indima ehlukene futhi ubanikeze iziphathimandla ezihlukile usebenzisa ama-plugin we-WordPress.